XOG CUSUB: Farmaajo oo Gali doona Safar la mid ah midkii Puntland & Galmudug, Gobaladee ayuu kusii jeedaa? – Somali News
XOG CUSUB: Farmaajo oo Gali doona Safar la mid ah midkii Puntland & Galmudug, Gobaladee ayuu kusii jeedaa?
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa wakaalada somalinewsnet.com u sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu safar midkii uu kusoo maray deegaanada Puntland iyo Galmudug ku tagi doono deegaanada Jubbaland.
Qorshahan oo hada ka socda Madaxtooyada Soomaaliya ayaa wali la isku raacin waqtiga Madaxweynaha uu safarka gali doono, waxaana arintan looga gol leeyahay in Madaxweynaha uu kulamo lasoo qaato dadka ku nool Gedo iyo Jubbooyinka.
Madaxweyne Farmaajo oo xiisad siyaasadeed oo adag gali doono dhawaan marka uu furmo Kalfadhiga Baarlamaanka ayaa safarkiisa dib u dhigan doono hadii uusan si dhaqso ku xalin tabashooyinka ay xukuumadda ka qabaan Xildhibaano aad u badan oo ku kacsan Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Si kastaba ha ahaatee Sarkaalka madaxtooyada ka tirsan ayaa inoo sheegay in safarka Madaxweynaha aad loo hadal hayo, inkastoo uu qaadan karo diyaar garowgiisa waqti dheer.
SAWIRRO: Adeeg Caafimaad bilaash ah oo lagu maamuusayo sanad-guuradii 1aad ee doorashada Farmaajo
XOG: Dekada Kismaayo oo ay ka Ambabaxeen 20 Doomood oo Khaliijka kusii jeeda & Qatarta Somalia oo…